China Premium Ham Luncheon Meat ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နေ့လယ်စာ အဆင်သင့် အသား > စည်သွတ်ဝက်သား နေ့လည်စာ အသား > ပရီမီယံ ဟမ်းနေ့လည်စာ အသား
1. ပရီမီယံ ဟမ်းနေ့လည်စာ အသား မိတ်ဆက်ခြင်း။
ပရီမီယံဝက်ပေါင်ခြောက်အသားသည် ဝက်သား၊ ရေ၊ ကစီဓာတ်၊ ပဲပိစပ်ပရိုတင်းအထီးကျန်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူမှုန့်နှင့် ဆိုဒီယမ် tripolyphosphate၊ sodium d-isoascorbate နှင့် ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရစ်စသည့် အစားအစာထည့်ဝင်သည့် စည်သွပ်ဗူးအသားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
2. Premium Ham Luncheon Meat ၏သတ်မှတ်ချက်
1) Specification: 198g/340g
3. Premium Ham Luncheon Meat ၏ အားသာချက်များ
1) နေ့လယ်စာအတွက် စည်သွပ်ဘူးအသားသည် အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဖိအားများသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်း၏ နေ့လယ်စာအသားသည် လတ်ဆတ်သောကြောင့် လတ်ဆတ်သော ထုတ်ကုန်များ၊ အစားအစာ၏ လတ်ဆတ်သောထုပ်ပိုးမှုနှင့် ဖိအားမြင့်မားသော ကုသမှုပြီးနောက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အမှန်တကယ်တွင်၊ ၎င်းသည် အမဲသားအာဟာရ၏ မိုးရွာသွန်းမှုတွင် ပိုကောင်းနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
2) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် အာဟာရပြည့်ဝမှု
တကယ်တော့ နေ့လယ်စာ အသားဟာ ကြာရှည်ခံဆေး မလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် နေ့လယ်စာစားဖို့ အသားက အရမ်းအန္တရာယ်ကင်းပြီး ကျန်းမာရေးကိုလည်း မကြာခဏ စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါပဲ၊ နေ့လယ်စာမှာ အသားကလည်း လိုအပ်သလို နေ့လယ်စာမှာလည်း အသားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ နီကိုတင်းနစ်အက်ဆစ်နှင့် အခြားအာဟာရဓာတ်များသည် အလွန်ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုများသော သတ္တုဓာတ်များလည်း မြင့်မားပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒါဟာ တကယ်စားလို့ရတယ်။
4. Premium Ham Luncheon အသားကို ဘယ်လိုစားမလဲ။
ပရီမီယံဝက်ပေါင်ခြောက်နေ့လယ်စာစားပွဲအသားကိုစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင်သင့်နေ့လည်စာအသားကိုခံစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိမ်းစားအစာကို တိုက်ရိုက်စားနိုင်သည်။
ဒုတိယ၊ နေ့လည်စာ အသားများကို မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုတွင် အပူပေးနိုင်ပါသည်။ နေ့လယ်စာစားတဲ့အသားကို အပူပေးပြီးရင် အရသာက ပိုကောင်းပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ နေ့လည်စာ အသားကို ကြော်လို့ရတယ်။
ဒါကြောင့် စပမ်းစားနေချိန်မှာ ဒါတွေကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။
5. အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သနည်း။
1) နှစ် 60 'စစ်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ။
2) အဆင့်မြင့် ခေတ်မီ စက်ကိရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်။
၃) တရုတ်အစိုးရမှ အရေးပေါ်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေး အစားအစာများ သတ်မှတ်ပေးသည်။
4) HACCP, ISO, QS တို့ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
5) ကျွန်ုပ်တို့သည် "1976 Tangshan ငလျင်","Vietnam defensive counter-attack","1998 Flood resistance","2008 Wenchuan ငလျင်","2017 Jiuzhaigou ငလျင်" စသည်တို့အတွက် အရည်အသွေးမြင့် စစ်ဘက်အစားအစာ အများအပြားကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ နှင့် တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့များနှင့် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် မျိုးဆက်ဟောင်း Mr.Zhu De၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ Mr.Yang Shangkun နှင့် အခြားပြည်နယ်နှင့် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသို့ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ကြသည်။
hot Tags:: ပရီမီယံ ဝက်ပေါင်ခြောက်အသား၊ တရုတ်၊ လက်ကား၊ ရောင်းချသူများ၊ အသစ်ဆုံး၊ စတော့မှာ၊ HACCP